Franchise resales maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franchise Resales
Egosi Franchise Resales
Kacha ọhụrụ na Franchise Resales
Gịnị bụ Franchise Resales?
Ntugharia mkpụrụ osisi bụ azụmaahịa rere ere nke resịrị franchisee gara aga. N'ihi nke a, azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ga-enwerịrị ndị ahịa dị adị na akụ ndị enyerela aka.
E nwere ọtụtụ ihe kpatara na franchisee nwere ike chọọ ree ahịa aka ya. Ikekwe ha chọrọ mgbanwe nke ọrụ, ma ọ bụ na ha na-achọ ire ma laa ezumike nka.
Uru Nleta Franchise
Enwere ọtụtụ uru dị maka ịzụta resale franchise, nke bụ na mgbakwunye na uru nke ịzụta franchise kama ịmalite. Uru dị n'ịzụrụ azụ ahịa azụmaahịa gụnyere ma nwee ebe ndị ahịa dị - ị ga-enweta ego. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịnwe ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ. Nke a pụtara na itinye ego nke azụ ahịa franchise n'ogo elu. Nke a bụ n'ihi na ị na-azụ azụmaahịa ahụ, yana akụ ya niile.
Kedu ụdị azụ ahịa Franchise dị?
Chọgharịa site na mpaghara franchise franchiseek nke franchise franchise dị n'okpuru. Ga-ahụ ọtụtụ azụgharị mkpọgharị dị iche iche, site na ọtụtụ ọrụ ọrụ. Gụnyere nri na ihe ọ beụ ,ụ, nri metụtara anụ, olu akwa na van na franchise dabeere.